गर्भावस्था सँग जोडिएका यी रोचक धारणा - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ३१ श्रावण २०७१, शनिबार १७:५२ |
आमा बन्दै हुनुहुन्छ ? यदि तपाइँ पहिलो पटक आमा बन्दै हुनुहुन्छ भने यो थाहा पाई राख्नु जरुरि छ कि गर्भावस्था महिलाको लागि निकै संवेदनशील अवस्था हो । यो अवस्थामा महिलालाई निकै धेरै स्याहार चाहिन्छ । नयाँ सदस्यलाई घरमा भित्राउने पूर्वतयारी पनि हो यो । गर्भवती महिलालाई सोही कारण घरमा निकै महत्वका साथ स्याहार गरिन्छ । साथीसँगी तथा छिमेकीले समेत विभिन्न खाले सल्लाह दिन्छन्,बुढापाका महिलाहरुले समेत विभिन्न खाले सल्लाह दिने गर्छन् । कतिपय त्यस्ता परम्परागत सल्लाहहरु नकारात्मक खालका समेत हुने गर्छन् र त्यसले आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्यमा असर समेत पूराउन सक्छ । जे होस् महिलाले गर्भावस्थाको दौरान धेरै कुरा सुन्नु र भोग्नु पर्छ ।
गर्भावस्था सँग केही सत्य तथा केही असत्य तर रोचक धारणाहरु रहेका छन् । जस्तै :समाजमा धारणा के छ भने गर्भावस्थाको अवस्थामा पेट ठूलो भयो भने ती महिलाले छोरी पाउँछिन् र पेट ठीक्कको भयो भने छोरा । तर विज्ञहरु भने पेटको बच्चाको लिंगको पहिचान लागि पेटको आकारका आधारमा गर्न नसकिने बताउँछन् । पेटको आकार महिला आफ्नै सरीरको आकारका साथै पेटको बच्चाको आकार लगायतका कुरामा निर्भर गर्छ ।
अर्को धारणा के पनि छ भने यदि पेटमा बच्चा भएको बेला महिलाले नूनिलो नमकिन खाने इच्छा गरिन् भनेे बुझ्नुपर्छ की उनको पेटमा छोरा छ । यदि पेटमा छोरी भएमा महिलाले गुलियो कुरा खाने इच्छा गर्छिन् । तर यसको पनि कुनै वैज्ञानिक आधार छैन ।
अर्को रोचक जनविश्वास के छ भने जुन गर्भवती महिलाले गर्भावस्थामा छातिमा जलनको महसुस गर्छिन् उनको पेटमा रहेको बच्चाको टाउकोमा निकै राम्रो कपाल पलाउँछ । तर विज्ञहरुले भने गर्भवती महिलामा छातिको जलनको समस्या सामान्य रहेको र यसको सम्बन्ध बच्चाको कपालसँग नरहेको बताउँछन् ।
धेरै मानिसमा के अन्धविश्वास पनि छ भने गर्भावस्थाको बेला सम्भोग गर्दा गर्भको बच्चालाई असर पुग्छ । तर विज्ञहरुले भने गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क गर्दा गर्भको बच्चालाई असर गर्ने नभै झन रोगबाट बचाउने बताउँछन् ।
गर्भवती महिलाले बढि तातो पानीले नुहाउन हुँदैन भन्ने धारणा छ । यसमा केही सत्यता पनि छ । विज्ञहरुका अनुसार गर्भावस्थामा बढि तातो मात्र नभएर बढि चिसो पानीले पनि नुहाउनु हानिकारक हुन्छ । गर्भावस्थामा महिलाले आफ्नो शरीरको तापक्रम १०२ डिग्री भन्दा तलै राख्नुपर्छ ।
गर्भावस्थाका बेला निकै सावधानी पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यी दिनमा के गर्ने तथा के कस्ता खानेकुरा खाने भन्ने पनि ज्ञान हुनु पर्दछ | गर्भवती महिलाका लागि आफ्नो भोजनमा प्रोटिन, आइरन तथा क्याल्सियम तत्व पर्याप्त हुनु आवश्यक छ । गर्भवती महिलाले सन्तुलित भोजन गर्ने हो भने आमा र गर्भको बच्चा दुबैको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ ।
महिलाले गर्भावस्थामा खानैपर्ने केही खानेकुरा यी हुन् :
पालुंगोको साग –
पालुंगोको सागमा क्याल्सियम तथा आइरन तत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसले आमाको सरीरमा रगतको कमी हुन दिँदैन र गर्भको बच्चा पनि स्वस्थ रुपमा हुर्किन्छ |
बदाममा प्रोटिन, भिटामिन इ तथा ओमेगा थ्री फ्याट्टी एसिड पाइन्छ ।
कुखुराको मासुमा प्रोटिनका साथै आइरन पनि पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ ।
यसमा फोलिक एसिड पाइन्छ । जसले सुत्केरीका बेला हुने पीडालाई कम गर्नुका साथै मधुमेहको जोखिम पनि कम गर्छ ।
यसमा प्रसस्त भिटामिन सी तथा फोलिक एसिड समेत पाइन्छ ।
ब्रोकाउलीमा पर्याप्त मात्रामा आइरन पाइन्छ ।
अण्डामा प्रोटिन, भिटामिन डी तथा क्याल्सियम तत्व पाइन्छ ।
माछामा क्याल्सियम, ओमेगा थ्री फ्याट्टी एसिड तथा भिटामिन डी पाइन्छ ।
दही पनि गर्भवती महिलाका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ ।
Previousके तपाइँलाई अधिक टाउको दुख्ने समस्या छ ?
Nextनेप्से ५३ अंकले बढ्यो
कविता : मेरो देश डुब्न लाग्यो
१६ मंसिर २०७२, बुधबार ०६:५३
१९ भाद्र २०७३, आईतवार ०२:०९